KDQ iyo maamulka Jaamacada Hargeysa oo kulan u qabtay Aradyda Ka hawl galaysa kaadh qaybinta | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 July 4 News KDQ iyo maamulka Jaamacada Hargeysa oo kulan u qabtay Aradyda Ka hawl galaysa kaadh qaybinta
KDQ iyo maamulka Jaamacada Hargeysa oo kulan u qabtay Aradyda Ka hawl galaysa kaadh qaybinta
Maanta oo bishu tahay 03/07/2017 waxa Hallka Jaamacada Hargeysa loogu qabtay ardaydii ka hawl galaysay kaadh qaybinta ka bilaabmi doonta 08da bishan Julay G/Maroodijeex.
Ardaydan oo shalay u soo xidhmay tababarkii hawsha ay qaban doonaan ee kaadh qaybinta, sidoo kalana loo dhaariyay gudashada hawshaas baaxada leh, ayaa ugu horeyn waxa u mahad naqay masuul ka tirsan waaxda shaqaalaha ee KDQ mudane Abdifatax.
Kulankan oo ahaa dardaran, dhiiri galin iyo wax u sheegba waxa si waayeelnimo ah kuna jirto xusuusin tababarkii la siiyay ardaydan u soo jeediyay Agaasimahe IbraahimX. cabdilaahi Diiriye uguna baaqay ardaydan in ay ka faa’iideystaan fursadan waaya’aragnomo ee ay heleen.
Waxa kaloo waano, dardaran iyo warbixinba siiyay ardaydii ka hawl galaysay kaadh bixinta G/maroodijeex Komishaneer AbdiFataax Ibrahim. Komishaneerku waxa uu ardaydaas loo diyaariyay kaadhqaybinta xasuusiyay miisaanka ay leedahay hawsha kaadh qaybinta iyo xaqa uu leeyahay mawaadinku oo ah in uu helo kaadhkiisa codbixinta.
Sidoo kale waxa uu komishaneer Abdifataax kala dardaarmay Ardaydaas ka hawl galeysa kaadh qaybinta in ay kaadhka ay bixinayaan gaadhsiiyaan muwaadinkii xaqa u lahaa, cidii soon doonan kari wayda daruufo awgeedna in ay si rasmi ah ugu soo celiyaan KDQ. sidoo kale waxa uu dareensiiyay masuuliyadaas saaran iyo haddii ay si qaldan isugu dayaan in ay ugu tagri falaan in ay muteysan doonaan xadhig iyo ganaaxba.
Gabagabadii waxa soo gunaanaday Guddoomiyaha Jaamacada Hrgeysa kuna amaanay ardayda iyo jaamacadaba hawshaas ay hayaan sidoo kalana kula dardaarmay ardaydii ka hawl galaysay kaadh qaybinta in ay ilaaliyaan sumcada Jaamacada iyo ta shakhsiyadeedba, si toosana hadda laga bilaabo ay u hoos tagaan KDQ awaamiirta wixii la farana u fuliyaan sida ugu haboon.